Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း)
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Triprolidine ဟာ ဓာတ်မတည်မှု , ဖျားနာနှင့်, အအေးမိလက္ခဏာတွေသက်သာရာဖို့အသုံးပြု တဲ့ antihistamine ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရောဂါလက္ခဏာတွေက အဖု, မျက်ရည်ထွက်ခြင်း , မျက်လုံးများ / နှာခေါင်း / လည်ချောင်း / အရေပြားတို့ ယားယံခြင်း , ချောင်းဆိုးခြင်း, နှာရည်ယိုခြင်း, နှာချေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဤဆေးဝါးသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ် စဉ်မှာ ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းများကို (histamine) ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်တဲ့ အခြားသဘာဝကပစ္စည်းများ (acetylcholine) ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် မျက်ရည်ယိုခြင်း နှင့်နှာရည်ယိုရောဂါလက္ခဏာတွေမှ သက်သာရာရစေပါတယ်။
အအေးမိချောင်းဆိုးဆေးထုတ်ကုန်တွေက6နှစ်ထက်ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်ထိရောက်မှုမရှိသလို လုံခြုံမှုလည်းမရှိပါဘူး။အထူးကုဆရာဝန်များကညွှန်ကြားမှုမရှိလျှင်6နှစ်ထက်ငယ်ရွယ်သောကလေးများရဲ့ အအေးမိရောဂါလက္ခဏာတွေကုသဖို့ ဖို့ဒီထုတ်ကုန်ကိုမသုံးသင့်ပါ။ တချို့ထုတ်ကုန် တွေကို 12 နှစ်ထက်ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ သင့်ရဲ့ဆေး အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးပါ။
ထိုထုတ်ကုန်က အအေးမိရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် သက်သာအောင် မလုပ်ပေးရုံမက ပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကျဆင်းစေရန်, သောက်သုံးမှု လမ်းညွန်ကို လိုက်နာပါ။ ကလေး အိပ်ပျော်ချင်အောင် ဒီထုတ်ကုန်ကိုမသုံးပါနဲ့။ တူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူပါဝင်ပစ္စည်းများရှိတဲ့ ဆေးတွေကို ချောင်းဆိုးနဲ့ အအေးမိတာတွေအတွက် မသုံးရပါ။ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးမိ ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသရန် ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြောပါ။( အရည်လုံလောက်စွာသောက်တာတွေ ,humidifier နဲ့ saline nose drops/spray သုံးတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သင်၏ဆရာဝန် ညွန်သည့်အတိုင်6းနာရီခြားတစ်ခါ အစာစားပြီးမစားပြီးနဲ့ မဆိုင်ပဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။ 24 နာရီတွင် ၄ ကြိမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနှင့် ။ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိသမျှလမ်းညွန်ချက်ကိုလိုက်နာပါ။ အစာအိမ်နာ ဖြစ်ပေါ်လျှင်ဒီဆေးဝါးကို အစားအစာသို့မဟုတ်နို့နှင့်အတူ သောက်နိုင်ပါတယ်။
measuring device သို့ ဇွန်းကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏသေချာတိုင်းပါ။ မှန်ကန်သောပမာဏ မရစေသော ကြောင့်အိမ်သုံးဇွန်းကိုမသုံးပါနဲ့။
ဆေးပမာဏက သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်မှု အပေါ်အခြေခံသည်။ ညွှန်ကြားထက်ပိုပြီး ဒီဆေးကို မသုံးပါနဲ့ သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်တော်တဲ့ ပမာဏထက်ပိုပြီး မသုံးပါနဲ့ ။ အများဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရန် ဒီဆေးကို မှန်မှန်ကိုသုံးပါ။ နေ့တိုင်းတူညီတဲ့အချိန်မှာသောက်ပါ။
သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက7ရက်အတွင်း မတိုးတက်ဘူးဆိုရင် သို့ သူတို့ကပိုဆိုးလာလျှင်, သင့်မှာ အဖျား / ချမ်းတုန်တာတွေ ဖြစ်လာရင်, သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှိတယ် ထင်လျှင် ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရယူပါ။
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Triprolidine ကို အကောင်းဆုံးထိန်သိမ်းနည်းကတော့ တိုက်ရိုက်အလင်းနှင့်အစိုဓာတ်ထိတွေ့မှု မရှိပဲ အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်, သင့်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ Triprolidine ကို သိုလှောင်ထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ကွဲပြားခြားနားသောသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ အခြား Triprolidine အမှတ်တံဆိပ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်အထုပ်မှာပါတဲ့ အညွှန်းကိုကြည့်ဖို့နဲ့ သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် သင့်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာမှာထားရှိပါ။
လုပ်ဖို့မညွှန်ကြားထားလျှင် Triprolidine ကိုအိမ်သာ သို့မဟုတ် ပိုက်ထဲ စွန့်ပစ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ဒိတ်ကုန်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ်မလိုအပ်သည့်အခါဒီထုတ်ကုန်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိလျှင်သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ :
သင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် သို့မဟုတ်နို့တိုက်မိခင် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် , သင် ကလေးယူဖို့စဉ်းစားထားမယ် သို့မဟုတ်ကလေးနို့တိုက်ကျွေးမှုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ထောက်ခံချက်ရှိမှ ဆေးသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
သင်ကအခြားဆေးဝါးများ ( ဥပမာ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးတွေလို ဆေးညွှန်းမပါဘဲဝယ်လို့ရရှိနိုင်သောဆေးများ )သုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
သင်က Janumet သို့မဟုတ်အခြားဆေးဝါးများနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုရှိခြင်း
သင့်မှာ မူမမှန်တဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်နှင့် နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်း ဒီဆေးအသုံးပြု ခြင်းရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ Triprolidine ကို အသုံးမပြုမီအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကိုချိန်တွယ်နိုင်ရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
။FDA အရ ဆေးရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မှုပမာဏမှာ — အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
FDA ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
A = အန္တရယ်မရှိပါ
B = အချို့လေ့လာချက်တွေအရ အန္တရယ်မရှိပါ
C = အန္တရယ် အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါတယ်
D = အန္တရယ်ရှိနိုင်ပါတယ်
X = လုံဝမသုံးသင့်ပါ
N = ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါ။
အမည်မသိသေးသော ကိုယ်ဝန်ဆောင် အန္တရာယ်အမျိုးအစားများအတွက်:
ကိုယ်ဝန်နှင့်ရင်သားကင်ဆာ-ကိုယ်ဝန်နှင့် နို့တိုက်ကျွေးစဉ်ကာလအတွင်း ဒီဆေးရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ အသုံးမပြုမီအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကိုချိန်တွယ်နိုင်ရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အားလုံးသော ဆေးဝါးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့် လူအများစုကတော့ မသိမသာ , သို့မဟုတ်အသေးစား, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယါ။အောက်ပါ အဖြစ် အများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဆက်လက်ဖြစ်နေတာ သို့မဟုတ် စိတ်နှောင့်ယှက်စရာဖြစ်လာလျှင်သင့်ဆရာဝန်နှင့် စစ်ဆေးပါ : မူးဝေခြင်း , နှုံးခြင်း , ပါးစပ် , နှာခေါင်း, ဒါမှမဟုတ်လည်ချောင်းခြောက်ခြင်း; စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း; အိပ်မပျော်ခြင်း .စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လျှင်ချက်ချင်းဆေးကုသမှု ခံယူပါ။ဓာတ်မတည့်မှု (; အဖုအပိန့် အကွက်ထခြင်း; ယားယံခြင်း ; အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း; ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်း ; ပါးစပ် , မျက်နှာ, နှုတ်ခမ်း, ဒါမှမဟုတ်လျှာ ရောင်ရမ်းခြင်း); ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်း သို့မဟုတ်ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း, နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း ; စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, မေ့မျောခြင်း ; ပြင်းထန်စွာ မူးဝေခြင်း, , ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း
လူတိုင်း ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို တွေ့ကြုံရတာမဟုတ်ပါ။အထက်စာရင်းမှာမပါတဲ့ အချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်မှာ ဒီဆိုးကျိုးတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Triprolidine က သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် သင့်ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းလဲတာ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ ရှောင်ရှားရန်, သင် သုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်း (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေး, မညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေး တွေနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်ထုတ်ကုန်အပါအဝင်) ကို သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို့အားပြောပြထားသင့်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် သင့်ဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည့်သည့်ဆေးကိုမျှ စသောက်ခြင်း, ရပ်ခြင်း , နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါ။
တစ်ချို့ ဆေးဝါးများက Triprolidine ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။အောက်ပါဆေးတွေသုံးရင် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။Sodium oxybate (GHB) က Triprolidine ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို တက်စေပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Triprolidine က အစားအစာသို့မဟုတ်အရက်နှင့်အပြန်အလှန် ဓာတ်ပြုခြင်း ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပုံပြောင်းလဲရုံမက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရဲ့ အန္တရာယ်ကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီဆေးမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် အစားအစာသို့မဟုတ်အရက် အကျိုးဆက်တွေ ကိုဆွေးနွေးပေးပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Triprolidine က သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးဝါးလာစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။သင့်ကျန်းမာရေး ပြသနာများ ဥပမာ ရင်ကျပ်ရောဂါ သို့မဟုတ်အခြားအဆုတ်သို့မဟုတ်အသက်ရှူပြဿနာများ (ဥပမာ emphysema, နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်), နှလုံးပြဿနာများ, သွေးတိုး, ဆီးချို, နှလုံးသွေးကြောပြသနာများ, လေဖြတ်ခြင်း, ရေတိမ်, သင့်အစာအိမ်သို့မဟုတ် အူပိတ်ဆို့ခြင်း, အနာ, ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်း, ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်း , ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း , မေ့မြောခြင်း , သိုင်းရိုက်ကြီးခြင်း စတာတွေကို ဆရာဝန်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေး (အသက် ၁၂နှစ် နှင့်အထက် )
PO 2.5 mg ၄ နာရီမှ ၆နာရီ တစ်ခါ (အများဆုံး , 10 mg per 24 h).
PO5mg ၁၂ နာရီတစ်ခါ (အများဆုံး 10 mg per 24 h).
ကလေးတွေအတွက် Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးများ (အသက်6မှ 12 နှစ်)
PO 0.94 mg၄ နာရီမှ ၆နာရီ တစ်ခါ (အများဆုံး 3.75 mg per 24 h).
ကလေးများ (အသက်4မှ6နှစ်)
PO 0.625 mg 2၄ နာရီမှ ၆နာရီ တစ်ခါ (အများဆုံး.5 mg per 24 h).
ကလေးများ (အသက်2မှ4နှစ်),
PO 2.5 mg ၄ နာရီမှ ၆နာရီ တစ်ခါ (အများဆုံး5mg per 24 h).
ကလေးများ (အသက်2နှစ်မှ4mo)
PO 1.25 mg ၁၂ နာရီတစ်ခါ (အများဆုံး , 2.5 mg per 24 h).
ကလေးများ (အသက်၏6မှ 12 နှစ်)
PO 2.5 mg every ၁၂ နာရီတစ်ခါ (အများဆုံး5mg per 24 h).
ကလေးများ (အသက်2မှ6နှစ်)
PO 1.25 mg ၁၂ နာရီတစ်ခါ (အများဆုံး 2.5 mg per 24 h).
Triprolidine (ထရိုင်ပရိုလီဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အရည် 1,25 မီလီဂရမ် /5mL
suspension 2.5 မီလီဂရမ် /5mL
အရေးပေါ်ဒါမှမဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု၌သင့်ဒေသခံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာန ကိုဆက်ခြင်း သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအရေးပေါ်ခန်းကို သွားခြင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဆေး dose တစ်ချိန်လွှတ်သွားရင် တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။သို့သော် သင်နောက်ဆေးတစ်ချိန်နဲ့ နီးကပ်နေမယ်ဆိုရင် လွှတ်သွားတဲ့ ဆေးကိုကျော်ပစ်ပြီး မူလအတိုင်းသောက်ပါ။နှစ်ခါသောက်သုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့် ။
Triprolidine https://www.drugs.com/cdi/triprolidine.html. Accessed July 15, 2016.
Triprolidine http://www.webmd.com/drugs/2/drug-64057/triprolidine-hcl-oral/details. Accessed July 15, 2016.
Triprolidine http://www.emedicinehealth.com/drug-triprolidine/article_em.htm. Accessed July 15, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 11, 2018